Sawiro: Arrimo ay isaga mid noqdeyn dowlada Farmaajo iyo tii Xasan Shiikh oo maanta muqdisho lagu arkay - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Arrimo ay isaga mid noqdeyn dowlada Farmaajo iyo tii Xasan...
Sawiro: Arrimo ay isaga mid noqdeyn dowlada Farmaajo iyo tii Xasan Shiikh oo maanta muqdisho lagu arkay
Muqdisho (Caasimada Online) – Sidii aad ku aqrisateyn wararkeenii hore waxaa maanta Magaalada Muqdisho safar lama filaan ah kusoo gaaray wafdi uu hogaaminayet xoghayaha arrimaha dibadda ingiriiska Boris Johanson.
Xoghayaha ayaa kulan xasaasi ah oo looga hadlay arrimo badan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Haddaba waxaa durba lasoo calaamadeeyey waxyaabo ay isaga mid noqdeyn dowladii Xasan Shiikh Maxamuud iyo midda Faraajo ee ku aadan soo dhaweynta wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska kuwaas oo Muqdisho imaaday markii uu Xasan hoggaanka hayey iyo hadda oo uu madaxweyne yahay Farmaajo.
Labada dowladood ayaa isaga mid ka noqday inay si qarsoodi ah Magaalada Muqdisho u keeneyn wasiirada arrimaha dibadda Ingirsiiska, waxaana xilligii Xasan Shiikh yimid Muqdisho Philip Hammond oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda Ingiriiska, waxaana qaabkaas loo fahamay amni xumada ka jirto Caasimadda.
Sidoo kale waxay isaga mid noqdeyn inaan la ogeysiin wasaarada arrimaha Dibadda ee Xilligii Xasan iyo dowladda hadda uu hoggaamiye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana booqashadaas isku koobay kaliya Shaqaalaha Madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Waxay haddana iskala mid noqdeyn inaan madaxdaas si weyn loo soo dhaweyn haba ugu darnaato booqashadii uu maanta Muqdisho ku yimid wasiirka Arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johanson.
Balse waxaa lasoo calaameeyey inay jirto hal arrin oo ay ku kala duwanayeen dowladda Xasan Shiikh Maxamuud iyo tan Farmaajo marka laga hadlayo booqashada wasiirada arrimaha dibadda ingiriiska ay ku imaadeen Muqdisho labadaas Xilli.
Waxaa la sheegay in Xasan Shiikh Maxamuud uu wasiirkii arrimaha dibadda ingiriiska kula kulmay garoonka diyaaradaha Muqdisho halka uu madaxweynaha Soomaaliya ee Hadda Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu ku qaabilay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya.
Sawiradii laga soo qaaday booqashadii ay wasiiradaas ku imaadeen Muqdisho xilliyadii Xasan Shiikh iyo Farmaajo